Wakiilada midowga Yurub ee Soomaaliya iyo barriga Afrika oo canbaareeyey weerarkii Kismaayo – Radio Daljir
Wakiilada midowga Yurub ee Soomaaliya iyo barriga Afrika oo canbaareeyey weerarkii Kismaayo
Seteembar 13, 2013 4:53 b 0
Brussels, September 13, 2013 – Ururka midowga Yurub ayaa si buuxda u canbaareeyey weerarkii shalay lagu qaaday madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam (Madoobe), weerarkaas oo khasaare dhimasho iyo dhaawc leh ay ka dhasheen.
Wakiilka gaarka ah ee midowga Yurub u qaabilsan barriga Afrika, Alexander Rondos, iyo danjiraha EU u qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone d?Urso, ayaa ku dhawaaqay in tacsidooda gaarsiinayaan ehelladii ay dadku kaga dhinteen Qaraxii shalay ee Kismaayo.
EU waxay sheegeen in qorshaha Soomaaliya iyo maamulka Jubba marka la eego heshiiskii ay ku galeen Adis-Ababa uu si wanaagsan u socdo isla markaasna labbada dhinacba ay ku jiraan fulintiisa, waxayse canbaareyn u jeediyeen caqabadaha Al-shabaab ee weerarada iyo Qaraxyada ah.
Ugu dambeyntii midowga Yurub waxay sheegeen in ay wefdiga Soomaalida ku soo dhoweynayaan shirka Brussels ka dhacaya maalinta Isniinta ah ee 16 September, waxay ku tilmaameen mid lagu midaynayo wakhtiga Soomaalida ay hiigsanayso mustaqbal wanaagsan.
Soomaaliya oo qabanaysa shirweyne looga hadlayo xag-jirnimada oo lagu casumayo culimada Islaamka